Igama lesiqhelo: i-midodrine (YAM ido drin)
Igama lebrand: IproAmatine, Orvaten
Iifom zedosi: ithebhulethi yomlomo (10 mg; 2.5 mg; 5 mg)
Udidi lweziyobisi: Iiarhente ezahlukeneyo zentliziyo
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoFebruwari 5, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
IMidodrine isebenza ngokunyanzela (ukunciphisa) imithambo yegazi kunye nokunyusa uxinzelelo lwegazi.
I-Midodrine isetyenziselwa ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphantsi ( hypotension ) ebangela ukuba nzima isiyezi okanye imvakalelo ekhanyayo, ngathi ungaphuma. I-midodrine isetyenziselwa kuphela xa uxinzelelo lwegazi oluphantsi luchaphazela ubomi bemihla ngemihla. I-Midodrine ayinakuphucula amandla akho okwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
I-Midodrine inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Akufanele usebenzise i-midodrine ukuba unesifo esibi sentliziyo, i-thyroid engasebenzi, isifo se-adrenal gland, isifo sezintso, ukuba awukwazi ukuchama, okanye ukuba uxinzelelo lwegazi luphezulu nangona ulele.
I-Midodrine inokunyusa uxinzelelo lwegazi nokuba uphumle. Eli yeza kufuneka lisetyenziswe kuphela xa unoxinzelelo lwegazi oluphantsi kakhulu oluchaphazela ubomi bakho bemihla ngemihla. I-Midodrine ayinakuphucula amandla akho okwenza imisebenzi yemihla ngemihla.
Akufanele usebenzise i-midodrine ukuba u-aleji kuyo, okanye ukuba unayo:
isifo sentliziyo kakhulu;
isifo sezintso, okanye ukuba awukwazi ukuchama;
pheochromocytoma (ithumba le ndlala adrenal);
i-thyroid engasebenzi; okanye
ibuprofen 800 mg yeyantoni
uxinzelelo lwegazi oluphezulu nangona ulele phantsi.
Ukuqinisekisa ukuba i-midodrine ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba unayo:
iglaucoma okanye imbali yembali;
isifo sesibindi; okanye
imbali yesifo sezintso.
Ayaziwa nokuba i-midodrine iyakulimaza na usana olungekazalwa. Tshela ugqirha wakho ukuba ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa.
Ayaziwa nokuba i-midodrine idlulela kubisi lwebele okanye ukuba inokwenzakalisa umntwana owanyayo. Tshela ugqirha wakho ukuba uncelisa umntwana.
Ndingayithatha njani i-midodrine?
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho kagqirha. Musa ukulithatha eli yeza ngesixa esikhulu okanye esincinci okanye ixesha elide kunokuba kucetyisiwe.
I-Midodrine ihlala ithathwa amaxesha ama-3 ngemini, kunye needosi ezahlulwe ubuncinci iiyure ezi-3 ngokwahlukeneyo. Thatha idosi yakho yokugqibela yosuku ngaphakathi kwe-3 okanye iiyure ze-4 ngaphambi kokulala.
Ungathatha i-midodrine kunye okanye ngaphandle kokutya.
Thatha la mayeza ngexesha lakho eliqhelekileyo lokuvuka, xa kunokwenzeka ukuba uthe tye kwaye ungalala phantsi okanye ulale. Buza ugqirha wakho malunga nendlela yokuthatha eli yeza ukuba uhlala ulala emini.
I-Midodrine inokunyusa uxinzelelo lwegazi lwakho ngelixa ulele phantsi okanye ulele (xa uxinzelelo lwegazi luhlala lusezantsi). Uxinzelelo lwegazi lwexesha elide (uxinzelelo lwegazi) kunokukhokelela kwiingxaki zonyango ezinzulu.
aleve kunye ibuprofen kunye
Landela imiyalelo kagqirha wakho malunga nendlela efanelekileyo yokubeka umzimba wakho ngelixa ulele okanye ulele. Kuya kufuneka ugcine intloko yakho iphakanyisiwe ukunceda ukuthintela uxinzelelo lwegazi oluphezulu.
Uxinzelelo lwegazi luya kufuna ukuba luhlolwe ngaphambi nangexesha lokunyanga nge-midodrine. Jonga uxinzelelo lwegazi xa ulele, kwaye ulijonge kwakhona ngentloko yakho ephakanyisiweyo.
Umsebenzi wakho wezintso kunye nesibindi unokufuna ukuba uhlolwe.
I-Midodrine yinxalenye yenkqubo yonyango enokuthi ibandakanye utshintsho kwindlela yokuphila, ukunxiba isitokhwe senkxaso kwimilenze yakho, kwaye mhlawumbi nokhathalelo lonyango olukhethekileyo. Landela imiyalelo yogqirha ngokusondeleyo.
Kuya kufuneka weqe idosi ukuba uya kuphumla okanye ulale ixesha elide ngexesha lakho eliqhelekileyo lokuvuka. Thetha nogqirha wakho malunga nendlela yokutshintsha ishedyuli yethamo ukuba kufuneka njalo.
Iimpawu ze-midodrine overdose zinokubandakanya ukunyuka koxinzelelo lwegazi (ukugungxula, intloko ebuhlungu , ukubetha kwentliziyo, ukungaboni kakuhle), ukuqunjelwa, ukuziva ubanda, okanye ingxaki yokuchama.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-midodrine?
Kunqande ukuthatha idosi kwisithuba esingaphantsi kweeyure ezi-3 ngaphambi kwexesha lakho lokulala eliqhelekileyo.
Buza ugqirha okanye usokhemesti ngaphambi kokusebenzisa naziphi na iipilisi zokutya ezingaphaya kwekhawuntare, okanye isikhohlela / iyeza elibandayo elinalo Yenyani okanye pseudoephedrine . La mayeza anokunyusa uxinzelelo lwegazi.
Iziphumo ebezingalindelekanga zeMidodrine
Fumana uncedo lonyango olungxamisekileyo ukuba unayo enye yezi iimpawu uxabane: imihlathi ; ukuphefumla nzima; ukudumba kobuso bakho, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Yeka ukuthatha i-midodrine kwaye ubize ugqirha wakho kwangoko ukuba unayo:
isantya sentliziyo esihamba kancinci - ukubetha komoya obuthathaka, isiyezi okanye iimvakalelo ezikhanyayo; okanye
uxinzelelo lwegazi oluphezulu ngokuyingozi - intloko ebuhlungu, ukubetheka kovalo ezindlebeni zakho ('ukuva' ukubetha kwentliziyo yakho), umbono ophuthileyo, ukubhuza ezindlebeni zakho, ixhala , ukudideka, iintlungu esifubeni, ukuphefumla kancinci, ukubetha kwentliziyo okungalinganiyo, ukuxhuzula.
ukuba ndindisholo , ukurhawuzelela, okanye ukurhawuzelela (ngakumbi entlokweni yakho);
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-tamsulosin kubantu abadala
intloko ebuhlungu, isiyezi, ukudinwa;
isicaphucaphu ; okanye
ukonyuka kokuchama, ukubanzima okanye ukubanzima ukuchama, okanye umnqweno wokuchama ngequbuliso.
Ulwazi lwedosi yaseMidodrine
I-Dose yesiqhelo yabantu abadala yoNyuko lweHypotension:
I-10 mg ngomlomo amaxesha ama-3 ngosuku ngexesha lasemini xa isiguli sifuna ukuma nkqo
-Idosi ezintathu zemihla ngemihla zinokunikwa ngeeyure ezingama-3, ukuba ziyafuneka, kodwa hayi rhoqo.
-Leli chiza akufuneki linikezwe emva kwesidlo sangokuhlwa okanye ngaphantsi kweeyure ezingama-4 ngaphambi kokulala.
Eli chiza kufuneka liqhubeke kuphela kwizigulana ezibonakala zifumana ukuphucuka kwempawu ngexesha lonyango lokuqala.
Sebenzisa: Unyango lweempawu i-hypotension ye-orthostatic (OH) kwizigulana ezinobomi bazo obukhubazeke kakhulu ngaphandle kokhathalelo oluqhelekileyo lweklinikhi, kubandakanya unyango olungelulo lwe-pharmacologic ezinje ngesitokhwe senkxaso, ukwanda kolwelo, kunye notshintsho kwindlela yokuphila.
iMallinckrodt yongeza i-20 mg
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-midodrine?
Ukuthatha i-midodrine kunye namanye amachiza athintela imithambo yegazi kunokunyusa uxinzelelo lwegazi. Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza akhoyo kunye nayiphi na into oqala ngayo okanye uyeke ukuyisebenzisa, ngakumbi:
Yogco , idigitalis, idroxidopa, fludrocortisone
intliziyo okanye amayeza oxinzelelo lwegazi;
intloko ebuhlungu iyeza;
iyeza le-thyroid njengelevothyroid okanye Synthroid ;
iziyobisi ukunyanga uxinzelelo lwegazi oluphezulu okanye isifo sedlala- prazosin , terazosin , okanye unqumle ; okanye
isithintelo se-MAO-isocarboxazid, yomgca , imethylene eluhlaza okwesibhakabhaka isitofu, phenelzine , irobhothi , iiseline , lwenyathi .
Olu luhlu alugqitywanga. Amanye amachiza anokusebenzisana ne-midodrine, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Ayilulo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oludweliswe kwesi sikhokelo samayeza.
windows 10 vumela i-desktop ekude
igama eliqhelekileyo le-imodium
Ikhompawundi yokususa intsumpa ijika lube mhlophe ulusu
ukuxuba i-aleve kunye ne-ibuprofen
I-prednisone 10mg yedosi yokupakisha imiyalelo engama-21